ဟန်ဆောင်ကောင်းလွန်းတဲ့ ကျော်ကျော်တို့ ချစ်သူနှစ်ဦးရဲ့ နောက်ကွယ်က အရှုပ်တော်ပုံတွေကိုအောက်ဖဲလှန်ချလိုက်တဲ့ သင်္ဇာမြင့်မိုရ် – Nyi Ma Lay
ခပ်မိုက်မိုက် ပုံရိပ်လေးတွေနဲ့ အတူ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ပုံရိပ်လေးတွေကို ပိုင်ဆိုင်ထားတာ ကတော့ သင်္ဇာမြင့်မိုရ်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူမကတော့ ပရိသတ် အားပေးမှုတွေနဲ့ အောင်မြင် နေတဲ့ သူတစ်ယောက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အလှ ပုံရိပ်လေးတွေကို အမြဲ ရိုက်ကူးပြီး လူမှုကွန်ရက်မှာ တင်ပေးလေ့ ရှိတာပါ။
လူမှု ကွန်ရက်မှာ ပုံရိပ်လေးတွေ အမြဲတင်ပေးလေ့ ရှိပြီး ပရိသတ်တွေ နဲ့အမြဲမပြတ် ရှိနေ သူပါ။ အခုမှာတော့ သူမရဲ့ တင်ထားတဲ့ စာလေးတစ်ခုကြောင့် ပရိသတ်တွေ စိတ်ဝင်စားနေ ကြတာပါ။ နာမည်ကြီး မင်းသားတစ်ယောက်ကို ခုလိုပဲအချက်လက် တိကျစွာပြောဆို လိုက်တာပါ။
မင်းသားတစ်လက် မြင်စေရန်.. ဒါမျိုးတွေ မရေးချင် မပြောချင်သော်လည်း..
ယောက်ျားတန်မယ့် စောင်းချိတ်ပြောဆို ရေးသားတတ်သော ..
စောင်တင်းပြောတဲ့နေရာ နာမည်ကြီးသူ ကိုယ်တွဲနေတဲ့ မင်းသမီးချစ်သူလေးက.. မိန်းမကောင်းလေးမို့ ..
(သူများရည်းစား/ သူများယောက်ျား/မိန်းမ) နဲ့.. တွဲနေကြတာလည်း မဟုတ် .. အစ်ကို့စော်လေးလို.. အစ်ကိုရှိလျက်နဲ့သူများ ပေးစာ ကမ်းစာယူနေတာမျိုးအစ်ကိုကိုယ်တိုင် ထိုးကျွေးတာမျိုးEx နဲ့ Date တာမျိုး
ဘယ်က ရ ထားလဲ? သိလျက်နဲ့ အစ်ကိုရယ်.. အဲဒါကမှ အစ်ကို့နေရာ ဘာလဲ?
Unfriend လုပ်လိုက်ပြီး မကြည့်ပဲနေတာလေ.. ဘာအကြောင်းမှ စိတ်မဝင်စားလို့ ခုလို ရက်နည်းနည်းကြာမှ
သူများပြမှ သိရတော့.. အခုလို အောက်ဖဲလှန်တာတောင်နောက်ကျသွားလားမသိဘူး..အစ်ကိုအသိဆုံးပါနော်..
သင်္ဇာမြင့်မိုရ်ဆိုတာ.. ​ဘယ်သူ့ ပေးကမ်းစာနဲ့မှ အသက်ဆက်နေတာ
မဟုတ်ဘူး.. ကိုယ့်စည်း ကိုယ့်ကမ်းနဲ့
ကိုယ့်ကိုယ်ကျင့်တရားနဲ့ နေလာတဲ့မိန်းမပါ.. မထိခလုတ် ထိခလုတ်နဲ့ –ျင် ထထမယားပါနဲ့.. တန်ရာ တန်ရာတုံ့ပြန်ပေးလိုက်ပါတယ်ရှင့်..
ခပ္မိုက္မိုက္ ပုံရိပ္ေလးေတြနဲ႔ အတူ ခ်စ္စရာေကာင္းတဲ့ ပုံရိပ္ေလးေတြကို ပိုင္ဆိုင္ထားတာ ကေတာ့ သဇၤာျမင့္မိုရ္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သူမကေတာ့ ပရိသတ္ အားေပးမႈေတြနဲ႔ ေအာင္ျမင္ ေနတဲ့ သူတစ္ေယာက္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အလွ ပုံရိပ္ေလးေတြကို အျမဲ ရိုက္ကူးၿပီး လူမႈကြန္ရက္မွာ တင္ေပးေလ့ ရွိတာပါ။
လူမႈ ကြန္ရက္မွာ ပုံရိပ္ေလးေတြ အျမဲတင္ေပးေလ့ ရွိၿပီး ပရိသတ္ေတြ နဲ႔အျမဲမျပတ္ ရွိေန သူပါ။ အခုမွာေတာ့ သူမရဲ့ တင္ထားတဲ့ စာေလးတစ္ခုေၾကာင့္ ပရိသတ္ေတြ စိတ္ဝင္စားေန ၾကတာပါ။ နာမည္ႀကီး မင္းသားတစ္ေယာက္ကို ခုလိုပဲအခ်က္လက္ တိက်စြာေျပာဆို လိုက္တာပါ။
မင္းသားတစ္လက္ ျမင္ေစရန္.. ဒါမ်ိဳးေတြ မေရးခ်င္ မေျပာခ်င္ေသာ္လည္း..
ေယာက္်ားတန္မယ့္ ေစာင္းခ်ိတ္ေျပာဆို ေရးသားတတ္ေသာ ..
ေစာင္တင္းေျပာတဲ့ေနရာ နာမည္ႀကီးသူ ကိုယ္တြဲေနတဲ့ မင္းသမီးခ်စ္သူေလးက.. မိန္းမေကာင္းေလးမို႔ ..
(သူမ်ားရည္းစား/ သူမ်ားေယာက္်ား/မိန္းမ) နဲ႔.. တြဲေနၾကတာလည္း မဟုတ္ .. အစ္ကို႔ေစာ္ေလးလို.. အစ္ကိုရွိလ်က္နဲ႔သူမ်ား ေပးစာ ကမ္းစာယူေနတာမ်ိဳးအစ္ကိုကိုယ္တိုင္ ထိုးေကၽြးတာမ်ိဳးEx နဲ႔ Date တာမ်ိဳး
ဘယ္က ရ ထားလဲ? သိလ်က္နဲ႔ အစ္ကိုရယ္.. အဲဒါကမွ အစ္ကို႔ေနရာ ဘာလဲ?
Unfriend လုပ္လိုက္ၿပီး မၾကည့္ပဲေနတာေလ.. ဘာအေၾကာင္းမွ စိတ္မဝင္စားလို႔ ခုလို ရက္နည္းနည္းၾကာမွ
သူမ်ားျပမွ သိရေတာ့.. အခုလို ေအာက္ဖဲလွန္တာေတာင္ေနာက္က်သြားလားမသိဘူး..အစ္ကိုအသိဆုံးပါေနာ္..
သဇၤာျမင့္မိုရ္ဆိုတာ.. ​ဘယ္သူ႔ ေပးကမ္းစာနဲ႔မွ အသက္ဆက္ေနတာ
မဟုတ္ဘူး.. ကိုယ့္စည္း ကိုယ့္ကမ္းနဲ႔
ကိုယ့္ကိုယ္က်င့္တရားနဲ႔ ေနလာတဲ့မိန္းမပါ.. မထိခလုတ္ ထိခလုတ္နဲ႔ –်င္ ထထမယားပါနဲ႔.. တန္ရာ တန္ရာတုံ႔ျပန္ေပးလိုက္ပါတယ္ရွင့္..
Previous post တော်လှန်ရေးကာလအတွင်းမှာ သူမလုပ်ဖြစ်နေတဲ့ အရာလေးတစ်ခုကို ဗီဒီယိုဖိုင်လေးဖြင့် ပြသလိုက်တဲ့ ပိုင်ဖြိုးသု
Next post သူမကိုရုပ်ရည်နဲ့ပတ်သတ်ပြီး ဝေဖန်နေတဲ့တစ်ချို့သောလူတွေကြောင့် အမြဲသိမ်ငယ်ခဲ့ရကြောင်းရင်ဖွင့်ပြောပြလာတဲ့ ပက်ထရစ်ရှာ